Shiinaha oo Ansixiyay in Saddex Caruur la Dhali karo (Sharci Cusub)
HomeWararka CaalamkaShiinaha oo Ansixiyay in Saddex Caruur la Dhali karo (Sharci Cusub)
August 20, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Shiinaha ayaa si rasmi ah u eegay sharciyadiisa si loogu oggolaado lammaanaha inay dhalaan illaa saddex carruur ah, si kor loogu qaado heerka dhalmada.
Xeer -hoosaadku wuxuu ka mid ahaa dhowr qodob oo Jimcihiibmaanta lagu ansixiyay kulan ay yeesheen xildhibaannada ugu sarreeya dalka, Golaha Shacabka Qaranka (NPC).
Faahfaahinta sharciga muranka ka-hortagga cunaqabataynta ee Hong Kong, oo ganacsato badani ka baqayeen inay geliso xaalad adag, ayaa sidoo kale la filayay.
Laakiin warbaahinta Hong Kong ayaa sheegtay Jimcihii in go’aanka dib loo dhigay.
Shiinaha ayaa dib ugu dhawaaqay bishii May inay u oggolaan doonto lammaaneyaasha inay dhalaan illaa saddex carruur ah, isbeddel siyaasadeed oo weyn.
Go’aankaas ayaa hadda si rasmi ah loogu ansixiyay sharciga, oo ay weheliyaan dhowr qaraar oo loogu talagalay kor u qaadista heerka dhalmada iyo “yareynta culeyska” korinta cunugga, ayay tiri wakaaladda wararka ee Xinhua.